Analytics maro be ho an'ireo mpampivelatra fampiharana finday | Martech Zone
Analytics maro be ho an'ireo mpandrindra fampiharana finday
Alakamisy Oktobra Oktobra 18, 2012 Douglas Karr
Raha mpamorona rindranasa finday ianao na manana rindranasa finday marobe ny orinasanao, nentim-paharazana Analytics tsy dia manapaka azy. Ny fitondran-tena amin'ny fampidinana, ny fahombiazan'ny fivarotana ary ny fitondrantena fampiasana dia angon-drakitra manan-danja izay afaka manampy anao hampitombo ny varotra na ny fisintomana, ary koa ny fifandraisan'ny mpampiasa. Tonga amin'ny fanantenana andrasana hafa ny olona rehefa mifampiresaka amin'ny finday… ary Analytics afaka manampy anao hahita ireo fotoana mety.
Countly dia Sehatra Analytics iray mifantoka amin'ny mpamorona rindranasa finday fotsiny.
Manome karazana endri-javatra sy tombontsoa marobe i Countly:
Dashboard - Raha vantany vao manokatra ny dashboard ianao dia ho gaga ianao mahita fa mora ny manara-maso ny angonao amin'ny sary mahafinaritra. Ny tabilao marobe dia mampiseho anao ny zava-drehetra indray mandeha amin'ny fomba kanto. Tsy mila mihady pejy maromaro hahitana ny fampahalalana ilainao. Araho amin'ny alàlan'ny Countly ny isan'ny fampiharana tsy manam-petra ary miovaova mora foana eo amin'ireo fampiharana, lalao ary ebook anao.
Fitondra-tena ho an'ny mpampiasa - Araho ny rafitry ny fividianana rindrambaiko amin'ny rafitry ny hetsika mahazatra an'i Countly. Araho ny fihetsiky ny mpanjifanao sy ny antony mahasosotra hampitomboana ny fifamatorana sy ny tsy fivadihana. Araho akaiky ny mpilalaoo hiantohana ny fahombiazana ary hampitombo ny vola miditra amin'ny lalao an-tserasera.
Manangana fampiharana tsara kokoa - Manampy anao amin'ny fandrefesana ary manombatombana ny firotsahana sy fampiharana ny fampiharana finday, ahafahana manatsara ny atiny finday. Mampiseho ny toerana misy ny tsimok'aretina mendrika ny sary mendrika, ahafahana mandavaka ilay olana mihitsy mba hanatsara ny fanentanana nataonao. Manohana be dia be ny finday avo lenta, iOS & Android manerantany, ary manantena ny hanampy bebe kokoa amin'ity lisitra ity.
Reports - Manome tatitra mahatalanjona ao anatin'izany ny tabilao sy ny latabatra, mampiseho ny fomba nanaovan'ny fampiharana anao nandritra ny fotoana iray. Tsy mora velively ny famoahana tatitra elektronika, noho ilay mpanamboatra tatitra mahavariana an'i Countly. Azonao atao ny manampy na manala pejy amin'ny alàlan'ny mpampita tatitra anay ary misafidy ny karazana tabilao haseho isaky ny pejy.
Fidirana finday - Aza adino mihitsy ny fahitana sarobidy momba ny fisoratana anarana raha mivory ianao, na eny an-dalana na lavitra ny latabatrao. Ny fampiharana finday marobe dia manolotra fiasa azo zahana sy azo zahana endrika. Zahao ny statistikan'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanamoriana mora. Midira amin'ny statistikan'ny fampiharana avy amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Avadiho ho fotoana mamokatra ny fotoana malalaka rehetra.
Tags: isainaanalytics amin'ny findayfinday fampiharanaanalytics amin'ny findaympandrindra fampiharana findayfampiharana findayanalytics momba ny fampiharana findayMobile Apps
Haino aman-jery sosialy sy vokatra momba ny fahadiovan'ny vehivavy
Tellagence: Fitsikilovana marketing ara-tsosialy